UGU DAMBAYN: Riyadii Jamaahiirta Barcelona Oo Rumawday, Lautaro Martinez Oo Qarka U Saaran Imaatinka Camp Nou & Faah-Faahinta Dalabka Ay Inter Milan Ku Qanacday - Gool24.Net
UGU DAMBAYN: Riyadii Jamaahiirta Barcelona Oo Rumawday, Lautaro Martinez Oo Qarka U Saaran Imaatinka Camp Nou & Faah-Faahinta Dalabka Ay Inter Milan Ku Qanacday
Kooxda Barcelona ayaa u muuqata mid ugu dambayn ku dhawaanaysa saxeexa gool dhaliyaha Inter Milan ee Lautaro Martinez oo ay mudo dheer doonaysay, kooxda ree Talyaani oo dalabaad dhawr ah soo diiday ayaa dhinaceeda u muuqata mid markan soo dabacday.
Lautaro Martinez ayaa bilooyin si aan kala joogsi lahayn loola xidhiidhinayay inuu kasoo dagayo Camp Nou si uu uga garab ciyaaro saaxiibkiisa xulka qaranka Argentina ee Lionel Messi.
Barcelona ayaa 22 sano jirkan xilli ciyaareedkan wacdaraha kusoo dhigay Inter u aragta bedelka mudada dheer ee weeraryahan Luis Suarez kaas oo galay sanadihii ugu dambeeyay ee waayihiisa ciyaareed.
Sida uu saaka boggiisa hore kusoo daabacay wargeyska Sport ee fadhigiisu yahay magaalada Barcelona, Barca iyo Inter Milan ayaa aad ugu dhaw inay soo af-meeraan heshiis buuxana ka gaadhaan qandaraaska uu Lautaro Camo Nou kusoo gaadhayo.
Warbixinta ayaa sheegaysa in labada kooxood ay heshiis isku waafaqayaan iyadoo waxa ugu dambayn qanciyay Inter oo dalabaad hore kusoo gacan saydhay uu yahay inay qaadato lacag dhan 60 Milyan oo euro oo lagu daray laba ciyaaryahan isla markaana ay Lautaro ku wareejiso Barca.
Labada ciyaaryahan ee Nerazuri ay qaadan doonaan ayaa mid ahaan loo qoondeeyay khadka dhexe ee Arturo Vidal oo uu taageere weyn u yahay tababare Antonio Conte halka ciyaaryahanka kale laga dhigi doono daafaca midig ee Nelson Semedo ama daafaca bidix ee Emerson oo Real Betis amaah ku jooga midkood.
Si kastaba ha ahaatee, Sport ayaa intaas ku daraya in Martinez iyo Barcelona ay xilli horeba isla meel dhigeen heshiis afka ah oo uu xiddigaasi haddii ay waxkasta dhaboobaan afar sano ugu saxeexayo Barcelona.